Izinto eziphezulu eziyi-10 esizifunde ku-WTTC ngosuku 2
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » I-Argentina Breaking News » Izinto eziphezulu eziyi-10 esizifunde ku-WTTC ngosuku 2
I-Argentina Breaking News • Izindaba Zezinhlangano • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Izindaba Zokuhlangana Komkhakha • emihlanganweni • Izindaba • Spain Izindaba Ezintsha • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba
Ngosuku lokugcina lomhlangano womhlaba wonke weWorld Travel & Tourism Council (WTTC) Summit owawuseBuenos Aires, e-Argentina, owabanjwa ngomhlaka 18 no 19 Ephreli, abake baba ngomengameli, ama-CEO omhlaba, kanye nabaholi bemibono bahlanganisa izihloko eziningi ezishisayo kwezokuHamba nezokuVakasha ezibandakanya: I-Cybersecurity; Ezombusazwe, Amandla Nenqubomgomo; Ezokuvakasha Ezizuzisa Wonke Umuntu; kanye Nokulwa Nokuhweba Okungekho Emthethweni Kwezilwane Zasendle.
Kulabo abangakwazanga ukuya, nasi isifinyezo se- Top 10 amaphuzu ayisihluthulelo:
1. Ezokuvakasha eCosta Rica zizuzisa amakhaya nabesifazane abahola kancane. Ama-80% we-GDP yaseCosta Rica evela kwezokuvakasha izuzisa i-quintile ephansi kakhulu kanti imisebenzi engama-60% edaliwe eyabesifazane. ULaura Chinchilla Miranda, owayenguMongameli waseCosta Rica
2. Isihluthulelo sokukhula kwezokuvakasha ukuncintisana. Ezokuvakasha kufanele zithathwe njengengxenye ebalulekile yenqubomgomo yezomnotho. Futhi kufanele unikeze izimo ezifanele zokuncintisana emkhakheni ukuze ubone ukukhula ngempela. UJosé Maria Aznar, owayenguNdunankulu waseSpain
3. Ukusebenzisana kubalulekile ekushintsheni inqubomgomo embi. Izinhlangano ezi-15 zihlangene ukuhambisa umyalezo: imibuzo entsha ehlelelwe ukuphepha yokungena e-USA ayinangqondo. URoger Dow, uMongameli ne-CEO ye-US Travel Association
4. ICalifornia ithola izindlela ezihlakaniphile zokukhuthaza abantu baseMexico ukuthi bavakashele. Ngemuva kwezinkulumo ezimbi zikaMongameli Trump ngeMexico, iCalifornia yaqhuba umkhankaso we-All Dreamers Welcome kanye 'nabangane bawo ngaphesheya komngcele'. UCaroline Beteta, uMongameli ne-CEO, vakashela eCalifornia
5. Ukuzingela ngokungemthetho akulinganiselwe ezinhlotsheni ezimbalwa ezisezingeni eliphakeme. Ukuzingela ngokungemthetho kusesilinganisweni sezimboni manje. Izinhlobo ezingama-7000 ziyizisulu zalo. UJohn E. Scanlon, Isithunywa Esikhethekile, Amapaki Ase-Afrika
6. Abantu bendawo babalulekile ekulweni nokuzingelwa ngokungemthetho. Yakha ingqalasizinda, qasha abantu bendawo… umphakathi uqala ukuqonda izinzuzo zokugcina izilwane zasendle ziphila. Bese baba yingxenye yesixazululo. UDarrell Wade, uMsunguli, Ukuhamba Ngesibindi
7. Imiphakathi eseduzane neNational Parks eRwanda ithola u-10% wemali etholakalayo. Kuze kube manje sekuqaliswe amaphrojekthi angama-751 asekelwe emphakathini ahlinzeka ngezindlu, izikole, imitholampilo yezempilo namanzi ahlanzekile. UDkt Edouard Ngirente, uNdunankulu waseRwanda
8. Ukubonisana nabantu kusiza ukulinganisela ukukhula nokusimama. Zonke iziphakamiso zezokuvakasha kufanele ziye ekubonisaneni nomphakathi eBulgaria. HE Nikolina Angelkova, uNgqongqoshe Wezokuvakasha
9. Impumelelo ekwamukeleni izihambi imayelana nokuxoxa indaba. Amahhotela okugijima: konke kuyindlela yeshashalazi, yokuxoxa izindaba. Abasebenzi bangabalingisi. Ibhizinisi lewayini nalo. Ngaphandle kwendaba nje isiphuzo. UFrancis Ford Coppola, ophumelele kahlanu kwi-Academy Award
10. Abaphumelele iTourism for Tomorrow Award benza izinto ezikhuthazayo. Ukusebenza kwesikhumulo sezindiza esiluhlaza kunawo wonke emhlabeni, kusetshenziswa izithako ezinomthombo osimeme ekudleni okundiza, ukuletha ugesi emadolobhaneni ase-Himalaya aqhelile, kuqashwe futhi kuqeqeshwe abantu bendawo futhi kuthuthukiswe indawo eqinisekiswe yindawo ephilayo. Lezi ngezinye nje zezindlela abanqobi ababeka ngazo ukusimama enhliziyweni yalokho abakwenzayo.
Uma uphuthelwe kulo nyaka, qiniseka ukumaka amakhalenda akho engqungquthela yeWTTC Global Summit yangonyaka ozayo ezosingathwa yi-Ayuntamiento yaseSeville, eSpain, ngokubambisana neTurismo Andaluz neTurespaña ngo-Ephreli 3-4, 2019.